एनआरएनको सहयोगमा कुश्मा र फलेवासमा स्वास्थ्य शिविर, विहादीमा एम्बुलेन्स सहयोग – Parbat News
२४ असोज, पर्वत । एनआरएनको सहयोगमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा दुई दिनसम्म संचालित मुटुरोग परिक्षण शिविरमा झण्डै ८ सय जनाको मुटु परिक्षण गरिएको छ भने विहादीमा एम्बुलेन्स सहयोग गरिएको छ ।
जिल्ला सदरमुकाम कुश्माबजार र फलेवास नगरपालिका स्थित देविस्थानमा छुट्टाछुट्टै मुटु रोग शिविर सञ्चालन गरिएको थियो । यसैगरी एक कार्यक्रमका वीच विहादीमा रानीपानी स्वास्थ्य चौकीलाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरिएको हो । आइतवार कुश्मामा संचालित शिविरमा झण्डै पाँच सय र शनिवार फलेवासमा संचालित शिविरमा दुई सय ५० भन्दा बढिको परिक्षण गरिएको आयोजक लान्य क्लव अफ शिवालयले जनाएको छ ।
उक्त शिविरलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले एनआरएनएका युरोप संयोजक कुल आचार्यले १ लाख रुपैया सहयोग गर्नुभएको थियो । रोजगारीका लागि रुसमा रहेका नेपालीहरुको सहयोगमा यहाँको एक विकट गाउँमा एम्बुलेन्स संचालनमा आएको छ । यसैगरी गैरआवासिय नेपाली संघ रूसको सहयोगमा दक्षिण पर्वतको विहादी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा रहेको रानिपानी स्वाथ्य चौकीमा एम्बुलेन्स सेवा संचालनमा आएको हो ।
एनआरएन रुसमा आवद्ध नेपालीहरुले एम्बुलेन्स खरिदका लागि रु २० लाख रुपैया संकलन गरेका थिए । एम्बुलेन्स सेवा नहुँदा थुप्रै विरामीहरुले बाटोमै ज्यान गुमाउनुपरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रवासीहरुले रकम संकलन गरी एम्बुलेन्स खरिदका लागि पठाएका हुन् । आइतवार रानीपानी स्वास्थ्य चौकीमा आयोजित एक कार्यक्रममा एन.आर.एनका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पर्वत क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वा्चित सांसद विकास लम्साल र एन.आर.एन रुसका अध्यक्ष रामेश्वर गौतमले स्वास्थ्य चोकीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।
सो अवसरमा बोल्दै गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले ग्रामिण विपन्न क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य सुधार गर्न एम्बुलेन्सले सहयोग पु¥याउने बताउँदै मानविय सेवाका क्षेत्रमा आगामी दिनमा पनि एन.आर.एन.ले थप सहयोग जारी राख्ने बताउनुभयो । गाउँमा एम्बुलेन्स सेवा शुरुभएसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहज हुने बताउदै उहाँले विकासमा स्थानीयनै सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सो अवसरमा सांसद विकास लम्सालले बाच्नु पाउनुपर्ने मानिसको पहिलो अधिकार रहेको र जनताको त्यही अधिकारको संरक्षण गर्ने क्रममा स्वास्थ्यलाई बढी प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।